नोरे-डेम को श्रद्धांजलि - 1aviagem.com
अघिल्लो पोस्ट: पेरिस मा कसरी वरिपरि जान?
अर्को पोस्ट: बार्सिलोनामा के गर्ने सल्लाह
पोष्ट गरिएको 19 2019 जुन द्वारा रोमोमो लुकाना
मलाई थाहा छैन कि यो पोष्ट कसरी सुरू हुन्छ, त्यसैले म तपाईंलाई बताउछु कि के हो यो विचार।
यो नोरे-डेमको कैथेड्रलमा एक श्रद्धांजलि बनाउन छ, जुन 15 / 04 / 2019 मा जलाइएको थियो।
यो केहि चीज हो जुन धेरै मानिसहरू संग सारिएको थियो, यसको सट्टा र दुखाइको बाहेक। मेरो लागि जो मित्र र परिवार संग फ्रान्स यात्रा गरिरहेको बेला आगो लगाउन केहि उल्लेखनीय थियो। तर उनीहरूको सामु आउनु भएकोमा म यो शताब्दीदेखि3कैथेड्रल दिनमा भेट्न मौका पाउँथे। निस्सन्देह, मैले केही शूटिंग गरे र केहि फोटो खिचे। त्यसपछि विचार आयो, किन तिनीहरू र संसारसँग साझेदारी नगरी किन कैथेड्रलको सुन्दरता र ध्वनिहरू? नोन्ट-डेम को ध्वनिक धेरै विशिष्ट थिए। अनि सबैले मेरो अन्तिम क्षणहरूमा भेट्न मौका पाएको थिएन। त्यसैले यो पोष्ट तस्बिरहरू भन्दा धेरै भिडीयो हुनेछ, किनभने यस विचारले तपाईलाई यो ठाउँको सानो पाठ अनुभव गराउँदछ। चलो
गॉथिक कैथेड्रलले 850 वर्ष भन्दा बढी छ। र यो फायरफाइटर्सको लागि धन्यवाद थियो कि मुख्य संरचना आगोको प्रतिरोध र निरन्तर उभिएको थियो। र यो संरचना थियो।
दुर्भाग्यवश केन्द्रीय टॉवर (तीर) ले राह दिए र गिर्यो। उनको साथ केहि टन लिन्छ र कैथेड्रल को केन्द्रीय भाग लाई प्रभावित गर्दछ।
यो उल्लेखनीय छ कि नोन्ट डेम यसको ध्वनिकको लागि चिनिन्थ्यो। त्यसैले मैले मूल भिडियोहरूलाई यी भिडीयोहरूमा राख्ने निर्णय गरेँ, र कुनै सम्पादन सम्पादन गरिएको थिएन वा छविहरूको निरन्तरताको सम्बन्धमा। बेशक त्यहाँ उपकरणको सीमा हो, किनकि अधिकांश भिडियोहरू सेलफोनको साथ बनाइयो (जुन रेखाको शीर्ष होइन)। तर यो सम्भव छ कि कस्तो आवाजको आवाज हुन सक्छ।
मुखौटाको भागको लागि मूर्तिहरूको बारेमा जिज्ञासा छ। वास्तवमा तिनीहरू योहूका राजाहरूको 28 रेखाहरू प्रतिनिधित्व गर्छन्। 14 पीडाहरू राजा दाऊद र त्यसपछि 14 सम्म येशूलाई सम्म।
तर फ्रांसीसी मानिसहरूले विश्वास गरे कि तिनीहरूले फ्रान्सेली राजाहरू देखाए। त्यसोभए जब फ्रांसीसी क्रान्ति समाप्त भयो तब उनीहरूले मूर्तिहरूलाई विद्रोह पारेर फ्रांसीसी राजाहरूका विरुद्धको विरोधको तरिकाको रूपमा समाप्त गरे। प्रसिद्ध फ्रान्सेली क्रांतिमा यसको आदर्श वाक्य: स्वतंत्रता समानता बेरोजगारी।
Notre-Dame को गुच्छा सुसमाचार को केहि भागहरु, विशेष रूप देखि सेन्ट म्याथ को सुसमाचार बताउँछ। एक नजिकको दृष्य देख्न सकिने छ कि मुखमा मूर्तिको रूपमा लिखित नयाँ नियमको भाग हो।
घंटहरू घण्टापछि बजाउँथे र दोस्रो विश्व युद्धको अन्त्य र द्वितीय विश्वयुद्धमा पेरिसको स्वतन्त्रतालाई सङ्केत गर्न पनि खेल्नुभयो। र क्याथेड्रल को सामने स्क्वायर थियो जहाँ अन्तिम फ्रान्सीसी शूरवीर टेम्पलर जला दिए गए थिए।
र अन्तमा मेरा फाइलहरूमा मैले रातमा नोरे-डेमको कैथेड्रलको अन्तिम फुटेज फेला पारेको थिएँ, एउटा डुङ्गा यात्रामा देखियो।
र सोच्नुहोस् कि यी भिडीयोहरू3दिनका छन् जुन यो भयो। फ्रान्सको पहिलो यात्रामा कैथेड्रल भेट्न यो भाग्यशाली छ। र यसैले म यस पोस्ट मा एक सानो ले आयो।
र कैथेड्रलमा के अन्य महत्वपूर्ण छ?
खैर, यो 850 सालको इतिहास हो र मलाई लाग्छ कि उनको कथा पर्याप्त रोचक छ।
Notre-Dame 1.160 मा निर्माण हुन थाल्यो र 180 वर्ष पछि पूरा भयो, कम्तीमा दुई उत्कृष्ट अवधिको आर्किटेक्चरल प्रभावहरू प्राप्त गर्यो। रोमीहरू, र गोथहरू।
यो यो थियो कि नेपोलियन बोनापार्टले आफैलाई राजाको घोषणा गरे। पोपका हातबाट मुकुट निकालेर यसलाई आफ्नै टाउकोमा राखे।
कैथेड्रलको नेभ क्रस जस्तो आकारमा छ, जुन सधैं बाहिरबाट देखिने छैन, किनकि टावरहरूले नोन्ट-डेम आयताकार देखाउँछन्।
दाँतको गिलास खिडकियों लाई कैथेड्रल को इंटीरियर लाई बेहतर बनाउन को लागी बनाइएको थियो जसमा मोज़ेक संग मसीह को कहानी ल्याइन्छ। यसले जो कोही प्रवेश गर्नमा फरक पार्दछ। अन्य गोथिक कैथेड्रलहरूको विपरीत, नोटर-डेममा प्रवेश गर्न तपाईंले स्वागत गर्नुभएको महसुस गर्नुभएन र डरलाग्दो छैन। भिन्नता ल्याईएको प्रकाश थियो।
चित्रहरू र खजानेहरू यसमा बाँचेका छन् जो किजाइनिन साम्राज्यमा। यो पनि भनिएको छ कि येशूका शिरबाट काँडाको मुकुटको टुक्रा यसमा भण्डारण गरिएको थियो।
साहित्यको लागि तपाईंको उपस्थिति र प्रेरणा। उदाहरणको रूपमा म यो प्रसिद्ध उपन्यास उद्धृत गर्दछु: द हन्चब्याक न्युरे-डेम, जो 1831 को फ्रांसीसी विक्टर ह्युगो हो, जसले पछि डिज्नी फिल्ममा परिणत गर्यो। यो रोमान्स कैथेड्रल मार्फत हुन्छ, जहाँ क्वेसिमोडो एस्मेरल्ड नाउँ गरेको जिप्सीको साथमा पर्दछ।
कोरल र कार्यक्रमहरू यसमा भयो।
त्यहाँ धेरै कुराहरू छन् कि कुनै आश्चर्य छैन कि त्यो एक वर्ष 13 लाख भन्दा बढी पर्यटक प्राप्त गर्दछ। पेरिसको प्रतिमा मध्ये एक हुनाले।
कथाको राम्रो पक्ष यो हो कि यो पुनर्निर्माण गरिएको छ, सबै पछि, यो 850 सालको इतिहास पछि एक परिवर्तन पनि योग्य छैन वास्तवमा।
के आगोले गर्दा?
पहिलो संदिग्ध आतंकवादको एक अधिनियम थियो। तर समय दिए जब आगो भयो र तथ्य हो कि त्यहाँ कुनै घातक पीडितहरू थिएनन्, यो परिकल्पनालाई शासन गरिएको छ।
अर्को सम्मोहन एक छोटो सर्किट हुनेछ, किनकि अर्को दिनको लागि यो कार्यक्रम हुनेछ।
र अन्तमा, के सबै भन्दा सही सम्मोहन जस्तो देखिन्छ जस्तो लाग्छ, बहालीका कामकालमा केहि हुन सक्छ, सम्भवतः एक बत्ती सिगरेट, शायद मोमबत्ती मध्ये एक को पतन, निश्चितता संग पुष्टि गर्न सकिँदैन।
म यहाँ बस्दै छु र आशा गर्दछु कि मैले ईसाईयत को यो सुन्दर प्रतीक को केहि ले लाएको छ जो उनहरु लाई भेटन को लागि सक्षम छैनन्। मलाई आशा छ कि यो चाँडो पुन: खोलिनेछ र पुन: भ्रमण गर्न सकिन्छ।
फ्रान्सलाई लाइभ गर्नुहोस्, ए यू रिभोइर।
यदि तपाईं बढी जान्न चाहानुहुन्छ, वा दान गर्न चाहानुहुन्छ, यो लिंक, जुन कैथेड्रल हो।
र यदि तपाइँ मनपराउनुभएको छ र दर्ता गर्न बिर्सनु हुँदैन र मनपर्ने यो पोष्ट छोड्नुहोस्। =)